Iyo Yakakwirira Pendant yeAbraxas yekudzora hupenyu hwako uye kuwana zvese yo - Nyika yeAmulets
Iyo Yakakwirira Pendant yeAbraxas yekudzora hupenyu hwako uye kuzadzisa zvese zvaunoda
80 zvinhu zvasara
zvinhu Yakakwirira Ruvara Amulet Haina kuvhurwa Yakakwirira Ruvara Amulet yakaitwa
Yakakwirira Ruvara Amulet Haina kuvhurwa
Yakakwirira Ruvara Amulet yakaitwa
Iyi ndiyo nyowani nyowani yepamusoro yeAbraxas uye yeOlympic Midzimu. Iyo haina kutsiva mamwe mamodheru atinawo asi iyi amulet yakagadzirirwa mhinduro dzekukurumidza uye kubvisa muganho wekuti hapana munhu anogona kubata amulet.
Mhedzisiro chete kune izvi ndeyekuti amulet inoda kucheneswa uye kubhadhariswazve mwedzi yega 9. Iwe unogona kuzviitira iwe pachako nepad yekuchaja kana kuraira sevhisi iyi kubva kwatiri.
Iyi inokosha amulet yeAbraxas inogona kukubatsira munzira dzakawanda iwe waizoona zvakaoma kutenda. Ingotarisa tarisa kuongororwa uye uzvionere wega kuti vanhu vangani vakawana mibairo mikuru yeiyi amulet.
Chii chinogona kuitwa newe pendant ichi?
Midzimu yeOlympic nemasimba avo anokwanisa pane zvese:
Arathron ine masimba akati wandei ayo achakubatsira iwe zvakanyanya.
Iye anokwanisa kushanda munguva yakapfuura, yazvino uye yemberi. Izvi zvinokubatsira iwe kugadzirisa nyaya kubva kumashure. Kuzvigadzirisa kuti zvisazove nemhedzisiro yakaipa parizvino.
Iye zvakare akakura pane zvese zvine chekuita nemasikirwo, kukura zvirimwa, kuwanda mukukohwa, uye kuziva kurapa kwemiti yezvirimwa
Simba rake rechitatu rakakosha kuchengetedza imba yako kana zvimwe zvivakwa
Bethor imwe yeMweya ine masimba anonyanya kubatsira
Bethor mweya wakanaka kwazvo wekuwana kururamisira. Kana iwe uri mumakakatanwa, achaona kuti ruramisiro yaitwa. Yakakura yenyaya dzedare asiwo mumakakatanwa nemhuri kana shamwari
Njere nderimwe remasimba makuru eBethor. Kuziva danho rekutora haizi nyaya yepfungwa nguva dzose. Bethor achakuzivisa iwe nenjere dzake dzisingagumi kuti ndeipi nzira yakanaka yekuita mune chero mamiriro
Simba rechitatu reBethor inyaya yekuti achawana zvakawanda. Izvi zvinoreva kuwanda kwehutano, Rudo, Upfumi, Shamwari, Zvivakwa, Simba, Dziviriro uye zvichingodaro. Iyi ndeimwe yemasimba ekuwedzera emamwe masimba emweya
Phaleg mweya wekusimudzira
Phaleg anowana rugare. Kana iwe uri mumamiriro ezvinhu anonetsa, anokubatsira kudzikamisa hasha dzemanzwiro uye nekugadzira nharaunda yekunzwisisana.
Phaleg, saBethor zvakare ari nyanzvi mukutonga, kugadzirisa hurukuro nekupa ruramisiro kune vese
Kana iwe uchida kuchengetedzwa pachako, Phaleg mweya wekutaura kwaari. Iye anodzivirira zvine simba vechidiki nevakuru, varume nevakadzi. Anodzivirira kurwisa kwepanyama, kwepfungwa uye pamweya. Mweya uyu zvakare mudziviriri wevamashiripiti.
Masimba ake esimba anowedzera masimba eimwe mimwe mweya achiaita ane simba uye akasimba.
uye 2 akakosha masimba
Simba rekutanga reOch, ​​mutongi wezuva kugona kuwana hupfumi. Anokwezva hupfumi uye kuwanda kune iye munhu anomukudza iye nekupfeka amulet yake
Simba repiri rakakosha kugona kuporesa. Och ichakubatsira iwe kuzviporesa iwe uye imwe pane yepanyama, yepfungwa uye pamweya nhanho.
Hagith Mweya une masimba mazhinji
Chero chipi zvacho chine chekuita nerudo, hagith achachiita. kana iwe uchida kutsvaga rwechokwadi rudo, simbisa hukama hwako, gadzirisa hukama, dzorera mudiwa kumashure. Hagith anogona kuita izvi
Hagith zvakare mweya unokupa unokwezva pabonde, kusimba uye kuita zvebonde
Vagadziri uye vagadziri vanobatsirwawo zvakanyanya kubva pasimba rechitatu raHagith. Uyu mweya unoshamisa unowedzera kugona kwako pamatanho ese. Hazvina mhosva kana iwe uri mupendi, munyori, muimbi, mutambi, kana chero chaunoita semunhu wekugadzira, Hagith mweya wekutendeukira kwaari.
Kana iwe uchitsvaga mukurumbira munharaunda, iwe uchazoda rake rechina simba. Hagith inopa Grace kuti vanhu vakuwane wakanakisa, unofadza, unofadza, unokwezva zvichingodaro
Simba rinotevera rinoshamisa reMweya weOlympic uyu kugona kwake kusimudzira runako. Kwete kwete kwepanyama chete, asiwo zvemukati, runako rwemweya.
Uye pakupedzisira simba rechishanu ndere kupa mufaro. Hapasisinazve mazuva erima, nguva dzinosuwisa kana kusuwa. Hagith ichavashandura vakapesana.
Ophieri iyo inosunga simba uye yakakosha kune kugona kwepfungwa
Ophiel ine masimba makuru maviri akakosha kwazvo. Yokutanga ndeyekusimudzira kugona kwepfungwa. Kana iwe uri wepakati, empath, tarot muverengi kana akazara murapi, iri rakakosha simba raOphiel richakubatsira iwe zvakanyanya.
Simba rechipiri raOphiel isimba remashiripiti rinozowedzera kugona kwese kwemashiripiti kwaungave uinako asi nemamwewo mazango aunopfeka
Phul yekuuka nekubatanidza masimba
Phul anoita musanganiswa wakakodzera wemasimba emimwe mweya yese inodiwa pamamiriro ese ezvinhu. Hapana chikonzero chekushushikana nemweya wekutendeukira kwaari. Phul achakuitira izvi.
Simba repiri raPhul kuuka. Iye achakuunzira iwo mameseji aunoda kuti utore matanho akakodzera asi achapawo zvido zvako kune mamwe maOlympic Spirits
Iyi ipfupiso yemasimba makuru eiyo 7 Midzimu yeOlympic, iwo ane mamwe, masimba asina kukosha asi chakanyanya kukosha inyaya yekuti mubatanidzwa weanomwe mune ino inoshamisa tsvimbo inosimudzira masimba ezviuru ne7.
Iyi amulet inogona kuita zvachose zvese zvaungade iwe. Haisi yekukurumidza. Iyi haisi piritsi, asi ivo vanoshanda nekukurumidza, pane zvese zvehupenyu hwako. Kana paine dumwa rimwe raungade kuwana, GADZIRA IYI. Hapana imwe tsvimbo inosanganisa mweya yakawanda uye simba.
Mutsara wepamusoro uye wezasi pane amulet uri muchiLatin uye uti:
Abrasax potestate est mecum. ego autem mweyauum iubes
iyo simba reArasaga iri neni. ndinoraira midzimu
Nguva dzose kuti zvive zvakanaka
Chinhu chete chaunofanirwa kuita kupfeka. Hapana chimwezve, chakavimbiswa. Haufanire kupa kana kupira chero chinhu. Abrasax uye iyo olympic mweya ndichagara ndinemi kuti ndikubatsire.